गलबन्दी बिबादपछी प्रकाश सपुतले लेखे मन छुने स्ट्याटस । – " कञ्चनजंगा News "
ताजा समाचार मनोरंजन राजनीतिक
गलबन्दी बिबादपछी प्रकाश सपुतले लेखे मन छुने स्ट्याटस ।
No Comments on गलबन्दी बिबादपछी प्रकाश सपुतले लेखे मन छुने स्ट्याटस ।
लामो समयको गलबन्दी बिवादपछी केही समय चुपचाप रहेका प्रकाश सपुतले फेसबूकमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरेका छन साथै शम्भु राईसँगको तस्बिर पनि अप्लोड गरेका छन । बार्ताबाट चाडै बिबाद टुङो लाग्ने देखिएको छ ।
प्रकाश सपुतको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै ।
समय समयमा यसरी अपत्यारिलो रुपमा समाजमा उठेका विषयहरु माथी बहस हुन जरुरी छ ! यसले परिवर्तनका निम्ती ठुलो भुमिका खेल्छ । जस्तो : नेपालमा गितसंगितको औपचारिक रेकर्ड र व्यवसाय शुरु भएको यतिका वर्ष सम्म पनि कपिराईट सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुनु दुखद कुरा हो । त्यसैले कपिराईट सम्बन्धि वृहत बहस हुनु जरुरी छ । नया र स्पस्ट कानुन बन्नु जरुरी छ । लोक गितको विषयमा त झन गम्भिर हुनु जरुरी छ । किनकि यो बौद्धिक सम्पति मात्रै नभएर राष्ट्रको पहिचान संग जोडिएको विषय पनि हो ।
जातिए विभेद सम्बन्धि अझै ठुलो बहस हुनु जरुरी छ । यो समयमा पनि जातिय बिषयमा वहस गर्नु पर्ने लड़ाई गर्नु पर्ने बाध्यता आधुनिक विश्व समाजमा नेपालको लागि सारै लाजमर्दो र दुर्भाग्य पुर्ण कुरा हो । यो हाम्रो नियति हो । हाम्रो चेतना स्तर र अन्धविश्वासको उपज हो । कतै पधेरामा तर्काएर कतै समाजिक सन्जालमा होच्याएर गरिने विभेदका नया नया ठाउ, शैली र सोचका विरुद्धमा बोल्न जरुरी छ । सोहि अनुसारको कानुन बन्न र कार्यान्वन हुन पनि जरुरी छ ।
यो दुईवटै विषयको बहसलाई जारी राखौ / निरन्तरता दिउ । एउटा टुङगो मा पनि पुर्याउ । त्यसमा अझै मिल्छ भने यो सामाजिक सन्जालको विषय पनि थपौ तर ! तर अलिक समय लिएर एउटा ठुलो समुहले अझै भनौ राज्य स्तरले छलफल र बहस गर्नु पर्ने यि गम्भिर विषयहरुमा एउटा सम्मानित जिवन बाचिरहेको अग्रज स्रष्टाको आत्मसम्मान र आखा भरी सपना र उर्जा लिएर आएको अर्को स्रष्टाको सिर्जनशिल समय वर्वाद हुनुहुदैन भन्ने हो । अरु जस्तै हाम्रो पनि सामान्य जिवन यापन र परिवारमा ठुलो समस्या आउनुत भएननी ।
त्यसैले पहिला यो मुख्य समस्या जे हो त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने हो कि ? । व्यक्तिगत रुपमा यो समस्या समाधान गरे पछि मात्रै संगित सम्बन्धि स्रस्टाहरु, संस्थाहरु संग बसेर कपिराईट सम्बन्धि छलफल र बहस गर्ने र जातिय रुपमा विभेद भोगिरहेका आफ्नो समुदाय संगै मिसिएर आवाज उठाउने प्रण गर्दछु । त्यसैले फेरी एक पटक स्पष्ट भन्छु – नआउनु समस्या आईहाल्यो यसले यदि भेगिय जातिय राजनीतिक रुप लियो भने दर्शक स्रोताले हामी दुईलाई मात्रै होईन सम्पुर्ण सर्जक स्रष्टा कलाकारलाई विभिन्न खेमामा बाड़ेर हेर्नेछन ।
साझा माया र लोकप्रियता सबैको घट्दै जानेछ । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा शम्भु राई सरको कुरा सम्बोधन हुने गरि हामी बिचको समस्या समाधान गर्ने अनि मात्रै यो घटनाबाट उब्जिएका अत्यन्त गम्भिर तर अस्पष्ट विषयहरु माथि तपाईहरु संगै जोडिएर बहसमा बस्ने मनसाय भएको हुदा बुधवार सम्मका लागि व्यक्तिगत रुपमा मैले रेस्पोन्स गरेन, यि विषयहरुलाई ईग्नोर गर्यो, संस्थागत भएन जस्ता गुनासाहरु नगरिदिनु होला । पहिलो कुरात म मानसिक रुपमा एकदमै विचलित भएको छु अन्य विषयहरुमा ध्यान जान सकेको छैन ।
← देशमा नेतृत्वकर्ताको हिसावले म प्रति विप्लवजीको मनमा घृणा छैन -प्रचण्ड → नेहा कक्कड पछि फेरी ,अर्का बलिउड गायक आदित्यनारायण झा पनि प्रस्तुति दिनका लागि नेपाल आउने